ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များ သတိပြုမိစေချင်သော အချက်များ။ | မျိုးမြန်မာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များ သတိပြုမိစေချင်သော အချက်များ။
Posted in: ဘာသာရေး.	Tagged: နည်းစဉ်, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသိစေရန်, ခေါတောကုလား.	Leaveacomment
ကျွန်တော် အခုပြောမှာကတော့ မွတ်ဆလင်တွေအနေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် ဘယ်လို စွမ်းစွမ်း တမံကြိုးစားနေကြသလဲ ဆိုတာရယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လို ပြန်လည် တုန့်ပြန်သင့်သလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားတဲ့အခါ အထောက်အကူပြုစေမည့် အချက်တွေပါ။ သူတို့လည်းသူတို့ဘာသာအတွက်လုပ်နေ ကြသလို ကျွန်တော်တို့လည်း ကျွန်တော်တို့ ဘာသာအတွက်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။
သူတို့ လုပ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေကို တွေ့သလောက် ရေးထားတာပါ။
နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ကိုဖတ်သင့်တယ်။ ပါလက်စတိုင်းဘာလို့ ပျောက်သွားလဲဆိုတာ။ ဒါတွေ ဖတ်လိုက်ရင် သူတို့လုပ်ချင်တာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသိလာလိမ့်မယ်။အနှစ်ချုပ်ကတော့ဗျာ။
၁။ နိုင်ငံထဲကို လူတွေ သွင်းတယ်။ ဘယ်သူမှ မနေချင်တဲ့ နေရာမှာနေတယ်။ ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။ (အခု ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေ လုပ်နေသလိုပေါ့)
၂။ ရွာငယ်လေးတွေ စုတယ်။ ပြီးရင်ပေါင်းတယ်။ အိမ်တွေမှာလည်း အိမ်ရှင်တွေက ပြည်မထဲကို ၀င်သွားတယ်။ အဲဒီ အိမ်တွေ မှာ လူအသစ်တွေ ၀င်လာတယ်။ ဒီတော့ လူဦးရေက မသိမသာနဲ့ ခိုးသွင်းတဲ့နည်းပေါ့ဗျာ။
၃။ ဘင်္ဂလီတွေက သူတို့အတွက် နိုင်ငံတစ်ခု လိုချင်တယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ ဘာသာတူဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်း မွတ်ဆလင်၊နိုင်ငံတကာ မွတ်ဆလင်တွေကို အကူအညီတောင်းတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခု ကတော့ မြန်မာလူမျိုးအစ္စလာမ်တွေက မြန်မာ ပြည်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ အစ္စလာမ်အတွက်ပဲ အလုပ် လုပ်ကြတာတော့ဆိုးတယ်ဗျာ။ဒါကတော့ သူ့သဘောနဲ့ သူပေါ့။ (ဒီနေရာမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဦးရာဇတ်တို့ တခြားဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကို လက်ညိုးထိုးပြီး သက်သေပြချင်လည်းရပါတယ်၊ တကယ်ခံစားနေ(ခဲ့)ရတဲ့ လူတွေရဲ့ ရင်ဘက်ထဲကိုတော့ အဲဒီသက်သေပြချက်တွေ က ပြောင်းလဲပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး)
၄။ ဘင်္ဂလီတွေက မကောင်းဘူးလို့ပြောရင် နတ်တဂိုး ကို လက်ညိုးထိုးပြီး ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကုလားကိုမကောင်းဘူးပြောရင် ဂန္ဒီကို ညွန်ပြီးကောင်းတယ်ပြောဦးမယ်။ အဲသလို ကလေးအထာတွေနဲ့ လုပ်ဦးမယ်။ (လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အဓိက ပုံဖော်တာ ချွင်းချက်တွေ မဟုတ်ဘူးဗျ)
၅။ ပြည်တွင်းကုလားတွေကလည်း အလာရှင်မြတ်ရဲ့ အလိုတော်ကျ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ လိပ်ခေါင်းထွက်အောင်အော်ပေးကြတယ်။ နှာခေါင်းချွန်ချွန် အသားနက်နက် ကုလားရုပ်ကြီးပေါက်နေတဲ့ သူတွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားပါဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ပြီးအော်ပေးတဲ့သူက အော်ပေးသေးတယ်။ ပထမဆုံး သူတို့ဘာသာကို လူတွေ နားလည်ပေးလာနိုင်အောင် အရင်ကြိုးစားမယ်။ သူတို့ ဘာသာကအေးချမ်း ပါတယ်ပေါ့။ ပြီးရင် ဘင်္ဂလီနိုင်ငံအတွက် ကြိုးစားပေးကြမယ်။
၆။ ဘင်္ဂလီက ထွက်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေကလည်း ပင်လယ်ပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကမ်းတင်သွားရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအစိုးရက နှိပ်စက်လို့ ထွက်ပြေးလာတာဆိုပြီး အခွင့်အရေးရအောင်တောင်းဦးမယ်။ မြန်မာပြည်ကို မရောက်ဖူးတဲ့ ကောင်တွေက အများကြီးပါဦးမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ထွက်လာတယ်ပြောရင် ဘယ်သူက သနားမှာမှ မဟုတ်တာ။ အခုလိုအော်တော့ အမျိုးတွေ အကူညီပါ ရသေး။ မဆိုးပါဘူး။
၇။ ပြည်တွင်းမှာလည်း အစ္စလာမ်တွေက မတရားကို နှိပ်စက်ခဲ့၊ အနှိမ်ခံ တရားခံရတယ်ဆိုပြီး ပုံဖော်ဦးမယ်။ အဲဒါအတွက် တစ်ခုပဲပြောမယ်။ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံမှာ ဘာသာစုံသာသာနာပြုခွင့်ရတဲ့နေ့ကျရင် အဲဒီကိစ္စ လာပြောဗျာ။( ဆိတ်သရေလောက်ထုတ်ပြပြီး ဆင်ကို ဖုံးချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်) တစ်ခုခုဆို လူ့အခွင့်အရေးဆိုပြီးအော်ဦးမယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘာသာကို လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် မရတာ၊ အမျိုးသမီးတွေက တခြားအမျိုးသမီးတွေလို ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ဝတ်ခွင့်ရတာတွေကရော လူ့အခွင့်အရေးပဲလား။ လည်လှီးသတ်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘာလို ညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးပြောသေးတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အလောင်းမလှတော့ဘူး။ အဲဒီကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူကို ပြောမယ်။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်တို့က လည်လှီးပြီး သတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလား။ကိုယ်ချင်းစာတရားထားကြည့်ဗျာ။
အဲဒါကိုကောင်းတယ်လို့ယူဆရင်ခင်ဗျားတို့ အဲသလိုတွေ သေကြပါလား။ ခင်ဗျားတို့ အချင်းချင်း ရော အဲသလိုသတ်ပေးကြပါလား။ (အလာ သစ္စာဖောက်သူတွေကို သတ်တာကိုမပြောဘူးနော်) ဟိုတလောကလည်း ဒိုင်ကြောင်တွေ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ဦးနေမျိုးဝေက တင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကို ဘုရားသခင်က သူတို့ဘာသာကိုလေ့လာဖို့ စီမံပေးတော်မူတယ်သလေးဘာလေးနဲ့။ ချီးဆိုတာ နံမှန်းတော့ သိတယ် ဘယ်လိုနံမှန်းမသိတဲ့သူတွေက အော် ဒီလို နံတာပါလားဆိုပြီး သိသွားကြတာပဲရှိတယ်။ ချီးဟာချီးပဲ။ မီးခြစ်ကထွက်လာတဲ့မီးကို ရေခဲပါလို့ပြောလို့ လက်နဲ့ဘယ်သူမှ သွားမကိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပူမှန်းလူတိုင်းခံစားဖူးနေလို့ပဲ။
၈။ ပြည်တွင်းက မွတ်ဆလင်တွေကလည်း သူတို့ဘာသာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးပါဆိုပြီး ကြွေးကြော်မယ်။
အင်တာနက်မှာဆိုလည်း ဟိုအထောက်အထားဒီအထောက်အထားတွေ ပြပြီး သူတို့ ဘာသာဝင်တွေဟာ ဒုစရိုက်သမားတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သက်သေပြမယ်။ ဥပမာ FBI က ထုတ်တဲ့ ပြန်တမ်းတို့ ဘာတို့ ပေါ့ဗျာ။ ဘွန်စတွန်မှာ ဗုန်းပေါက်တဲ့ ကို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ ဆိုတာ ဖတ်ချင်နေတာ။ တင်ပါ့တင်ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ ဝေါထရိတ်စင်တာကို လေယာဉ်ဝင်တိုက်တာ တောင် အမေရိကန်လက်ချက်ဖြစ်အောင် ပြောခဲ့ တဲ့သူတွေ ဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ အပျော့ပေါ့။ ဘာသာကိုချဲ့ချင်တဲ့ သူနဲ့ နိုင်ငံကို ချဲ့ချင်တဲ့ သူပေါင်းမိသွားတာ မြန်မာ ပြည်အတွက်တော့ ရင်လေးစရာပဲ။
၉။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို အကြမ်းဖက်ပါတယ်လို့ ဆိုချင်သေးတယ်။ ဘုရားကတော့ ငါ့အတွက် လူသတ်ပေးပါတို့။ ငါ့ကိုမယုံတဲ့သူတွေကို သတ်ဖို့တော့ ဘယ်တုန်းကမှ မမိန့်ခဲ့ဘူး။ ဗုဒဘာသာဝင်တစ်ယောက်က သူ့ ဘာသာအတွက် လူသတ်တဲ့ ပုံတစ်ပုံတင်နိုင်ရင် အစ္စလာမ်ဘာသာက လည်လှီးသတ်တဲ့ movie ဖိုင် ၁၀ ခု တင်နိုင်တယ်ဆိုရင် လက်ခံမလား။ ဘာသာအတွက်ဆိုပြီးလူသတ်တာကို ပြောတာနော်။ သူ့ဟာသူ ရန်ငြိုး နဲ့သတ်တာတော့ လာမပြောနဲ့။ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ဘာသာအတွက်ဆိုပြီးတော့ အကုသိုလ် အဖြစ်ခံပြီး သတ်တဲ့သူတော့ ရှားလိမ့်မယ်။ သူ့ဟာသူ ကြည့်မရလို့ အမြင်ကတ်လောက်အောင်လုပ်ထားလို့ ဒေါသဖြစ်ပြီးသတ်တာပဲရှိမယ်။ ဘုရားက သတ္တ၀ါတွေကို ဘယ်လို အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သတ်တာ မကောင်းဘူး လို့ပဲ ဆုံးမတယ်။
၁၀။ သံဃာနဲ့ပြည်သူကိုရန်တိုက်ပေးမယ်။ တရုတ်နဲ့ ရန်တိုက်ပေးမယ်။ (ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ကုလားတွေ နဲ့ က ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေ က အေးဆေးပဲဗျ)။ အိမ်ကြက်ခြင်းအိုးမည်းသုတ်ပြီး ခွပ်ခိုင်းမယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အင်အားလျော့ချမယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်က နာသလိုလိုနဲ့ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေကိုပါ ဆွဲထည့်မယ်။ စစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားတွေကို နှိပ်စက်တဲ့ အကြောင်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေ နှိပ်စက်ခံရတာကို ဖြည့်ပြီးပြောမယ်။ သူတို့က အရမ်းသနားစရာကောင်းနေတယ်ပေါ့။
၁၁။ မွတ်ဆလင်တွေ ခမျာ စောင်တိုလေးကို ခြုံနေရသလိုပေါ့ဗျာ။ ဟိုက ဖုံး၊ ဒီကပေါ်နဲ့။ ဒီမှာ မွတ်ဆလင်တွေ က ငြိမ်းချမ်းပါတယ်ပြောနေတုန်း၊ ထိုင်းမှာ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဒေါ်စုနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ကို မီးရှိုးလိုက်ရော။ ဒါတောင် မဟုတ်ဘူးပြောချင်သေးတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့ အဖွဲ့က မီးရှို့တဲ့ ၃ယောက်နဲ့ ရှို့ပါ တယ်ပြောတာတောင် မယုံချင်ကြသေးဘူး။ ဖိုတိုရှော့လိုလို ပြောချင်သေးတယ်။ အေးပေါ့လေ။ သူတှို့ နိုင်ငံတကာကို လုပ်သလို ထင်နေတာကို။ တိဘက်မှာ ငလျင်ကြောင့်သေတဲ့သူတွေကိုလည်း မြန်မာမှာ သတ်တာပါဆိုပြီးပြောတဲ့သူကပြော။ ထိုင်းမှာ ဖမ်းမိတဲ့ သူတွေကို လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးမှောက်ခိုင်းထား တဲ့ပုံကိုလည်း မြန်မာရဲ ကလုပ်သလိုပြောနဲ့။
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေနဲ့ အခုဖြစ်နေတာတွေကို တိုက်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ် ထဲကတော့ သိပ်မဝေးပါဘူး။ နည်းသစ်တွေ တွေ့လာရင်လည်း တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။
စာကြွင်း။ ။ ကျွန်တော် အခုပြောတာ အစ္စလာမ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံအသစ်ထောင်ပေးဖို့ (မြန်မာပြည်က နယ်မြေကို ဖဲ့ပေးဖို့) အားပါးတရ လုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကိုပြောတာပါ